प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना खोटाङको बजेट दुई करोडभन्दा बढी
असोज १५, खोटाङ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई (मकै जोन)को कार्यालय खोटाङले चालू आर्थिक वर्षमा रू. दुई करोड दश लाख बराबरको कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कम्तिमा २०० रोपनी जग्गामा एकै किसिमका बाली लगाउनेगरी चक्लाबन्दी खेती प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम ल्याइएको इकाईले जानकारी दिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालासँगको समन्वय बैठकमा इकाईका वरिष्ठ कृषि अधिकृत डा. मणिरत्न अर्यालले चालू आर्थिक वर्ष चक्लाबन्दीलाई प्राथमिकतामा राखेर मकै खेती कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्ने बताए ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको सभाहलमा बुधवार आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ कृषि अधिकृत डा. अर्यालले चक्लाबन्दीमा पकेटरब्लकरजोन सञ्चालनका लागि सहकारी र नीजि क्षेत्रबाट माग संकलन, सम्भाव्यता अध्ययन र कार्यान्वयनका लागि रू. ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
यस्तै, चालू आर्थिक वर्ष स्थानीय तहको लागत सहभागितामा मकैको बीउ श्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि रू. ३० लाख, भण्डार, प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्दोग स्थापनाका लागि रू. २० लाख, बसन्ते मकैको क्षेत्रफल बिस्तारका लागि रू. दश लाख, हिउँदे मकै क्षेत्र विस्तारका लागि रू. पाँच लाख, स्वदेशी हाईब्रिड मकै प्रदर्शनका लागि रू. एक लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइएको छ ।
मकै जोन कृषि यान्त्रीकरण सहयोगका लागि रू. २५ लाख, प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यावसायिक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन अनुदानका लागि रू. दश लाख र गत वर्ष विस्तार भएको क्षेत्र र नयाँ विस्तार हुने क्षेत्रमा सिचाइँ पूर्वाधार निर्माण गर्न रू. ६० लाख बजेट खर्च गरिने डा. अर्यालले जानकारी दिए ।
कार्यक्रमले ओगटेको क्षेत्रमा शुरुका वर्ष १।९ टन प्रतिहेक्टर मकै उत्पादन भएको ठाउँमा कार्यक्रमपछि गत वर्ष मकैको उत्पादकत्व ३।४७ टन प्रतिहेक्टर पुगेको डा. अर्यालले बताए । मकै जोनमा हाल १३४ कृषक समुह, १३ ओटा सहकारी, ७३ उद्यमी तथा २ हजार ९१५ जना किसान सहभागी छन् ।
कार्यक्रममा सहकारीले मकै जोनअन्तरगत दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ दोर्पाचिउरीडाँडामा बाँडिएको मकैले उत्पादन नदिएको, दिक्तेलमै किसान भरत राईले ९ ओटा प्लाष्टिक टनेलमा लगाएको गोलबेँडा नफलेको गुनासो गरेका छन् । रासस